တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး
Print	| Email	| Hits: 16499
The Final Match & Awarding Ceremony of MFF-Warrix Futsal Cup 2019 ပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲ ကျင်းပ GV ATHLETIC.FCအနိုင်ရ ချန်ပီယံဖလား ဆွတ်ခူး
Web Admin	2019-07-17 10:44:05
၂ဝ၁၉ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက် The Final Match & Awarding Ceremony of MFF-Warrix Futsal Cup 2019ပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲနှင့်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက် ညနေ ၄ နာရီက ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်အတွင်းရှိ (Mandalar Thiri Indoor Stadium)အားကစားခန်းမတွင်ကျင်းပရာ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် တက်ရောက်ကြည့်ရှု့အားပေးပြီး ဆုရအသင်းအား ချန်ပီယံဆုဖလားပေးအပ်...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
Web Admin	2019-07-17 10:40:03
၂ဝ၁၉ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူပူဇော်ခြင်းအခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ခန်းမ၌ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယ၊ သမ္မတစာချကျောင်း၊ မြတောင်တိုက်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တအင်္ကုရ အမှူးပြုသော ပင့်သံဃာတော် ဆရာကြီး(၁၄)ပါး၊ ကြွရောက်ချီးမြင့်တော်မူပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်...
Web Admin	2019-07-12 11:24:04
၂ဝ၁၉ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက် လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုပွင့်လင်းအောင်လုပ်ဆောင်ကြသကဲ့သို့ တရားမျှတရေး ရှေးရှုပြီးလုပ်ဆောင်ပေးသော အဖွဲ့အစည်းများလည်း အမှန်တကယ်လိုအပ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောကြားသည်။ ကျောက်ဆည်မြို့ မြို့တော်ခန်းမတွင် ၂ဝ၁၉ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီက ပြုလုပ်သော ၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်...
(၄၂)ကြိမ်မြောက် သွေးလှူရှင်များ ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း သွေးအလှူရှင်ပေါင်း(၄၅၀၀၀)ဦးခန့်၏ သွေးယူနစ်ပေါင်း (၆၀၀၀၀)ကျော်ကို လိုအပ်သည့် သွေးလူနာများအတွက် အသုံးပြု ကုသမှုဆောင်ရွက်နိုင်
Web Admin	2019-07-11 10:13:43
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ၃၁လမ်း၊ လမ်း ၇၀ နှင့် ၇၁ လမ်းအကြားရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်းရှိ ခန်းမဆောင်တွင် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် နံနက် ၈ နာရီ၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် (၄၂)ကြိမ်မြောက် သွေးလှူရှင် များဂုဏ်ပြုပွဲတွင် ယနေ့ပြုလုပ်သည့်အခမ်းအနားသည်...
Web Admin	2019-07-10 11:06:17
၂ဝ၁၉ ဇူလိုင်လ ၉ ရက် မန္တလာဒီဂရီကောလိပ်တွင်တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သော ဓမ္မာရုံသစ်အား ရေစက်ချလှူဒါန်းခြင်း၊ သံဃာတော်များအား ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ခြင်းနှင့် အလှူရှင်များအားဂုဏ်ပြုခြင်း အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲက မန္တလာဒီဂရီကောလိပ်ရှိ အဆိုပါဓမ္မာရုံတွင်ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားသို့ တံတားဦးမြို့နယ် စကားအင်းရွာ ကျောင်းသစ်ကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝိမလနှင့် ဆရာတော်သံဃာတော်များ ကြွရောက်ချီးမြှင့်တော်မူပြီး...
<< < 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 > >>